दरबार हाइस्कुल विद्यार्थी बढाउने अभियानमा - सुसूचित नेपालको चित्र: Onlinepana
दरबार हाइस्कुल विद्यार्थी बढाउने अभियानमा
गोरखा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुलको आकर्षक नवनिर्मिति भवनका कक्षकोठाहरु अहिले खाली छन् । विश्वव्यापी कोभिड–१९ को जोखिमका कारण विद्यार्थीहरु घरबाटै इन्टरनेटको सहयोगमा अनलाइन अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसो त मुलुकमा कोरोना भाइरसको जोखिम नभएको भए पनि अहिले यस विद्यालयमा उल्लेख्य विद्यार्थी भने हुने थिएनन् ।
मुलुकको राजधानी काठमाडौँको मुटुमा रहेको नयाँ भवन र प्रयोशालाहरुको सुविधायुक्त तथा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने यो सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन मेहनत गरिरहनु पर्ला ? या अब यहाँ आफैँ विद्यार्थी बढ्लान् ? विद्यालयका व्यवस्थापन र शिक्षक वर्गमा पनि अहिले यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
यहाँका केही शिक्षकहरु भने अब विद्यार्थी आफैँ बढ्नेमा आशावादी छन् । उनीहरु भन्छन्, “कोरोना नभएको भए अहिलेदेखि नै विद्यार्थीको आकर्षण हुन्थ्यो । अबका केही वर्षमा यहाँ भर्नाका लागि भीड हुनेछ । अभिभावकहरु आएर हात जोडेर मेरो बच्चा राखिदिनुस् भन्न थाल्नेछन्, त्यो अवस्था केही वर्षमै आउनेछ ।”
संस्कृत माविका शिक्षक माधव लामिछानेका अनुसार कक्षा ६ देखि १२ सम्म संस्कृत पढ्न कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यार्थीहरु बढी आउने गरेका छन् । दरबार हाइस्कुलमै पढेका लामिछाने विसं २०४७ मा भानु माविमा दुई हजार २५० सम्म विद्यार्थी रहेको स्मरण गर्छन् ।
यहाँको संस्कृत माविकै उत्पादनका व्यक्तिहरु अहिले मुलुकको राजनीति र अन्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका छन् । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, नेपाली काँग्रेसका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, नरहरि आचार्य र बद्री पाण्डे तथा कूटनीतिज्ञ प्राडा.जयराज आचार्यलगायतले यहीँबाट विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका थिए । प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि यस विद्यालयका उत्पादनको उपस्थिति रहेको छ ।
# दरबार हाइस्कुल
शुक्रवार, मंसिर ५ २०७७०४:१३:३६